Isu tinokuudza iwe kuti chii edamame, ayo zvivakwa uye kuti inotorwa sei | Kudya kweNutri
Edamame iri kutsvaira dzimba dzevanhu vakawanda. Pamwe iwe hauzive chaizvo kuti chii chikafu ichi, kuti zvipi zvacho kana kuti chinodyiwa sei chaizvo. Usanetseka, pazasi, isu tinokuudza zvese zvakadzama.
Soy kushandiswa iri kuwedzera, yakapararira pasirese. Edamames chikafu chine hutano, akapfuma kwazvo mune zvinovaka muviri uye akakodzera kuzviita sechikafu chinonaka.ari edamame zvinobva kumasoya, zita rinoreva dhishi rakagadzirwa nesoya beans idzi, kwete chigadzirwa chacho. Ndokunge, mapundu egirini haadaidzwe edamame Kugadzirira kwacho kuri nyore kwazvo, chinhu chakonzera kuti vanhu vazhinji vazvipinze mukudya kwavo.
1 Chii chinonzi edamame?
2 Edamame zvivakwa
3 Unozvidya sei?
4 Kwokutenga kupi
Chii chinonzi edamame?
Edamame ndiwo mapodhi kana bhinzi yakasvibirira yesoya, vakaunganidzwa vasati vakura. Ivo vakasvibira, ruvara rwakafanana chaizvo nemapea nebhinzi zvatinoziva. Inobva kumhuri yetsanga uye kukura kwayo idiki. Mune ganda resoya rakasvibirira tinowana pakati pe2 kana matatu masaga e soya uye ivo vane mukaha mukuru pakati pavo.
Edamame, Yakavharwa nevhudzi diki, hunhu hwekufunga kuti uzive kusiyanisa kubva kune mamwe maruva matsva.
Tevere, isu tinokuudza iwe kuti ndeapi anoshamisa ehupfumi uye mabhenefiti eedamame.
Iyo sosi huru ye mapuroteni emuriwo mavambo
Iyo inomira kunze mune yayo huru yezvinyorwa mukati calcium nesimbi.
Chikafu ichi yakaderera mumafuta, iyo yakakwana kune vese avo vanotsvaga kudzikisa kana kudzora cholesterol.
Iyo ine antioxidant zvivakwa, nekutenda kune yayo yakakwira zvemukati zve isoflavones. Isoflavones anobatsira vakadzi menopausal kuchengetedza ganda rakanaka uye muviri.
El edamame, inotarisa magnesium, mineral inovandudza hutano hwepfupa.
Yayo yepamusoro simbi yezvinyorwa uye zvemhando yepamusoro mapuroteni zvinoita kuti chive chikafu chinokwanisa kutizadza isu nesimba.
Iyo ine yakakura kwazvo zvemukati mu faibha. Kune ese 100 gramu edamame tinowana magiramu masere efaera.
Icho chikafu chisina-gluten, saka izvo zvinokonzeresa kuguten zvinogona kuzvitora pasina matambudziko.
Inochengeta yedu immune system yakasimba.
Ndicho sosi huru yesimba.
Inokurudzirwa kuvanhu chirwere cheshuga
Deredza matambudziko eitsvo
Inovandudza utano hwemapfupa edu.
Inodzivirira anemia kune yayo yakakwira fiber zvemukati.
Edamame, sezvo ichiuya kubva kumasoya, inowedzerawo maIndices edu muzvinhu zvinotevera:
El edamame Izvo zviri nyore kwazvo kudya, iyo yakagadzirirwa nekukurumidza uye mhedzisiro yacho inonakidza. Panguva yekuzvidya, podhi inovhurwa nerubatsiro rwemeno kana maoko, nerurimi tinounganidza zviyo mukati uye ganda rinoraswa. Icho chimwe chinhu sekudya mapaipi.
Iyo yakajairika uye yakapusa ndeye vadzivire mumvura ine munyu mushoma. Kwemaminitsi angangoita matatu kana mashanu. Kana tangobikwa, tinogona kuvaperekedza nemafuta uye munyu zvinokambaira kana zvimwe zvinonhuwira. Kune rimwe divi, tinogona kubvisa zviyo nekuzviisa musaradhi, kana kuzvimisa mupani ine muto mudiki we soy uye minced gariki.
Chinhu chakajairika kutora icho seapiretiInounzwa nepod yose yakabikwa uye tinoidya sekunge aive mapaipi. Vanogona kutorwa zvichidziya kana kutonhora. Iko kunhuhwirira kwayo kwakapfava uye kunosanganisa nenhamba yakakura yezvikafu
Parizvino, mushure mekurumbira kwechikafu ichi, tinogona kuwana edamame munzvimbo dzakasiyana nemisika zvinozivikanwa kune vese. Tinogona kuiwana mune akasiyana mafomati, nyowani, mbeu, yakagadzirira kudya kana chandoIpapo isu tinokuudza iwe kwaunogona kuwana ichi chikafu chinonaka.
En Amazon Spain edamame mbeu dzinogona kutengwa kuti dzirime.
Muchitoro Lidl Isu tinoiwana yakaomeswa, ine 400 gramu fomati.
En Mercadona, chimwe chezvitoro zvikuru zveSpanish uye kwadziri kupererwa nenzvimbo, tinochiwana muhuwandu hwemagiramu mazana mashanu muchikamu chakaomeswa nechando.
En mhaswa Isu tinoiwana iri diki fomati, zana magiramu eakagadzirira-ku-kudya edamame, yakanaka nzira yekuyedza kana iwe uchiri kusazviziva.
En Kumunda, musupamaketi ino tinoiwana mune 300 gramu fomati yakadzika-chando.
El Dare reChirungu, isu tinotengesa edamame muhuwandu hwemagiramu mazana mashanu, uye muchaiwana mubazi rakagwamba nechando.
La SirenaSupamaketi iyi, iyo inotengesa zvakanyanya zvigadzirwa zvakaomeswa nechando, yatengawo edamame, mumafomati mazana mana-magiramu.
Edamame Iine mutengo unotangira kubva pa € ​​1,80 kusvika kungangoita 4 euros, zvinoenderana nechiratidzo uye huwandu.
Kana iwe uchigara mutaundi repakati nepakati, iwe zvirokwazvo uchawana iwo mukana wekuwana edamame, mune chero fomati. Nekudaro, kana iwe ukasaiwana, unogona kuiodha online, parizvino kune akawanda mapeji ewebhu ane zvitoro zvepamhepo zvinotipa zvigadzirwa zvavo zvitsva uye zvinotumira kwatiri munguva pfupi.
Enda mberi uye edza chikafu ichi chine hutano uye kuti yave yemufashoni sei. Yakasarudzika sarudzo yekukurumidza kudya, isina macalorie uye inonaka. Tamba nemaresipi ako uye wobva wawedzera nenzira yaunonyanya kufarira. Iwe une chokwadi chekupa yako ndiro mbichana kubata.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kudya kweNutri » Nutrition » Isu tinokuudza iwe kuti chii edamame, ayo zvivakwa uye kuti inotorwa sei
4 + 1 matipi ekubika neCDD
Chii chinonzi turnip